Raw Dutasteride powder (164656-23-9) hplc = 98% | AASraw suppliers
/ Products / Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni / Dutasteride upfu
Rating: SKU: 164656-23-9. Category: Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukuraira kweDutasteride powder (164656-23-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Dutasteride powder ndeyeboka remishonga inonzi 5-alpha-reductase inhibitors. Inoshandiswa kugadzirisa zviratidzo zvebenin prostatic hyperplasia (BPH) mune varume vane prostates yakakura. BPH inenge isina kukwanisa kuwedzera ye prostate gland iyo inowanzoitika mumurume mushure mezera re 50..Dutasteride powder inoshanda kuderedza kugadzirwa kwe dihydrotestosterone (DHT), hormone inokonzera kukura kwe prostate gland. Dutasteride yakasvibiswa poda inoderedza zviratidzo zveBPH nekuderedza ukuru hwe prostate.
Molecular Kurema: 528.53
Color: chena kumira pfupa
Raw Dutasteride powder mune zvepabonde ekuchancing cycle
Dutasteride powder inodzivirira kutendeuka kwe testosterone kune dihydrotestosterone (DHT) mumuviri. DHT inobatanidzwa mukubudirira kwebenastatic hyperplasia (BPH). Dutasteride poda yakashandiswa kurapa benign prostatic hyperplasia (BPH) mune varume vane prostate yakakura. Dutasteride powder inobatsira kuvandudza urinary flow uye inogonawo kuderedza chido chako chekuvhiyiwa kweprostate gare gare.
Dutasteride powder dzimwe nguva inopiwa nemumwe mushonga unonzi tamsulosin (Flomax).
Kusarudza Mukuru weDose yeBenign Prostatic Hyperplasia:
0.5 mg muromo kamwe kamwe pazuva
Shandisa: Kurapa kwechirwere chinonzi benign prostatic hyperplasia (BPH) muvarume vane prostate yakakura kuderedza dambudziko rekuchengetedza urinary yakawanda (AUR) uye kuvhiyiwa kunoenderana neBPH.
Dutasteride powder inouya se capsule kutora nemuromo. Inowanzoitwa kamwe chete pazuva kana kuti pasina kudya. Tora Dutasteride poda yakasvibiswa kumativi akafanana zuva rimwe nerimwe. Tevera mazano ekunyora tsamba yako zvakanyatsonaka, uye bvunza chiremba wako kana wemhizha kuti atsanangure chero chikamu chausingazivi. Tora Dutasteride poda yakajeka sezvakataurwa. Usatora zvishoma kana zvishoma kana kuitora kakawanda kupfuura zvinorayirwa nachiremba wako.
Shingai makodhesi yose; usasvinura chew, kana kuti uaputse.
Zviratidzo zvako zvinogona kuvandudzwa mushure mokunge watora Dutasteride powder kwemwedzi ye3, asi zvinogona kutora mwedzi 6 kana nguva yakareba kuti iwe uone kubatsirwa kwakakwana kweDutasteride yakasvibirira. Taura nachiremba wako nezvekuti uri kunzwa sei panguva yawakarapwa.
Dutasteride powder inogona kudzora zviratidzo zvako asi haigone kurapa mamiriro ako. Ramba uchitora Dutasteride poda yakashata kunyange kana iwe uchinzwa zvakanaka. Usarega kutora Dutasteride powder usingatauri nachiremba wako.
Kumbira mushonga wako wemishonga kana chiremba kuti uwane ruzivo rwomugadziri ruzivo rwemurwere.
Dutasteride powder haafaniri kutorwa nemukadzi kana mwana. Dutasteride powder inogona kudonhwa kuburikidza neganda, uye vakadzi kana vana havafaniri kubvumirwa kubata Dutasteride raw powder capsules.
Kunyange zvazvo Dutasteride pfumbi yakasviba haisi yekushandiswa nevakadzi, iyi mishonga inogona kukonzera kukanganisa kuberekwa kana mukadzi akabatwa nayo panguva yekuzvitakura. Dutasteride powder capsules haafaniri kutarisirwa nemukadzi ane pamuviri kana kuti angava nemimba.
Usatsvaga, kupwanya, kana kuzarura dutasteride yakasvibiswa pfupa capsule. Shingai the capsule full. Dutasteride powder inogona kutsamwisa miromo yako, muromo, kana huroti kana capsule yavhuniwa kana yavhurwa musati maimedza.
Kana mukadzi akangoerekana asangana nemishonga iyi kubva kune capsule inoputika, geza nzvimbo yacho nesipo nemvura pakarepo.
Usati watora Dutasteride poda yakasviba, taurira chiremba wako kana iwe wakamboita chirwere chinopesana nemishonga iyi, kana kune mishonga yakafanana inonzi finasteride (Propecia, Proscar).
Kushandisa Dutasteride powder kunogona kuwedzera mungozi yako yekuva nekenza yeprostate. Chiremba wako achaita miedzo kuti ave nechokwadi chokuti hauna mamwe mamiriro ezvinhu angakudzivirira kuti urege kushandisa Dutasteride pfumbi yakasviba.
Usapa ropa paunenge uchitora Dutasteride powder uye kwechinguva mwedzi 6 mushure mekunge kurapwa kwako kuchiguma. Dutasteride poda yakasvibiswa inogona kutorwa muropa uye inogona kukonzera kukanganisa kuberekwa kana vakadzi vane pamuviri vachigamuchira kuwedzerwa neropa rine Dutasteride powder.
Dutasteride powder yakagadzirwa ne4-azasteroid compound iyo inoritor inhibitor yeiyo inonzi 1 uye inonzi 2 isoforms ye steroid 5 alpha-reductase inoshandiswa kurapa benign prostatic hyperplasia (BPH) mune varume vane prostate yakakura. Dutasteride poda yakasibatsira inobatsira kugadzirisa urinary kutenderera uye inogonawo kuderedza kudiwa kwekuvhiya kweprotate gare gare. Dutasteride powder dzimwe nguva inopiwa nemumwe mushonga unonzi tamsulosin (Flomax). Dutasteride pfumbu yakasviba inodzivirira kutendeuka kwe testosterone kune dihydrotestosterone (DHT) mumuviri. Dutasteride powder inogona kuwanika muhuwandu.
Zvipembenene zvinowanzoitika zvinowanzoitika neDutasteride poda yakasanganisa dzinosanganisira:
chinetso chokuwana kana kuchengeta erection (inogona kupfuurira mushure mekumira Dutasteride powder)
kuderera muhutano hwepabonde (inogona kupfuurira mushure mekumira Dutasteride yakasviba powder)
Ejaculation zvinetso (zvinogona kupfuurira mushure mekumira Dutasteride powder)
mabere akawedzerwa kana kurwadza. Kana ukacherechedza mazamu kana mazamu ekubuda, taura nachiremba wako.
Kana izvi zvikanganiso zvinyoro, zvinogona kupera mumazuva mashomanana kana masvondo mashoma. Kana vakanyanya kuoma kana kuti vasati vanyangarika, taurai nachiremba wako kana wemishonga.
zvinokonzera kugadzirisa. Mienzaniso inosanganisira:
kurira kwechiso chako, rurimi, kana huro
kenza yeprotate. Zviratidzo zvinogona kusanganisira:
kuwedzera prostate-specific antigen (PSA) kuwedzera
kuwedzerwa kuwedzerwa nguva
kunetseka kutanga kutora
kushaya simba kwemvura
zvinotambudza / zvinopisa kukora
kunetseka pakuva kana kuchengetedza erection
ropa muhuro kana semenje
kurwadziwa kazhinji kana kuoma mumutsipa wezasi, mahudyu, kana mahudyu
Nzira yekutenga Dutasteride powder kubva kuAASraw